I-Bucs neSuperSport emidlalweni emithathu - Isolezwe | IOL.co.za
News Business Sport Motoring Tonight Lifestyle Travel SciTech Blogs Newspapers Classifieds Property Jobs Isolezwe Home Izindaba Ezokungcebeleka Ezemidlalo Intandokazi Ezemisakazo Ezezimoto I-Bucs neSuperSport emidlalweni emithathu
August 8 2012 at 12:44pm Comment on this story
U-OUPA Manyisa we-Orlando Pirates okubhekwe ukuthi asheshe alulame njengoba iqembu lakhe linemidlalo enzima emithathu elizoyidlala neSuperSport United.
MTHOKOZISI MNCUSENI KUPHELA umoya uma bechaza ngokuphithanelwa kwabo ngamakhanda abaqeqeshi bamaqembu amakhulu kuPremier Soccer League (PSL), u-Augusto “Njenje” Palacios, we-Orlando Pirates, noGavin Hunt, weSuperSport United, amaqembu azoshukana kathathu esontweni elilodwa. Ngemuva kokuthi iPirates itonyulwe neSuperSport kowe-semi final yeMTN 8, kucacile ukuthi la maqembu azoshukana kathathu esontweni elilodwa kule nyanga yabesifazane. IBhakaniya naMatsatsantsa bazoqala ngowomlenze wokuqala we-semi final yeMTN 8 ePeter Mokaba Stadium ngo-Agasti 19. La maqembu azophinde ahlangane koweligi enkundleni efanayo ngo-Agasti 22 bese evalelisana ngowomlenze wesibili weMTN 8 ngo-Agasti 25 e-Orlando Stadium. Kuthintwa uPalacios ngalokhu uzwakalise umuzwa wokungakwazi okufanele akwenze ukuze athole umphumela osile kule midlalo. “Imidlalo uma ithothelene eduze kanje, kuba kubadlali ukuthi yini abayifunayo. Okuhle wukuthi isizini iyaqala okuzobenza babone ithuba elikahle lokuthatha indawo esikimini. Akekho-ke ongazi ukuthi kunzima kanjani ukubhekana neSuperSport. Njengoba sizokube sibaqaphe ngelokhozi nabo bazokube benza into efanayo. Ngimincele ukuthi kufike le midlalo sebeluleme oManyisa (Oupa) noMatlaba (Thabo) okubhalwe ngabo ukuthi sebeluleme ekubeni kungenjalo,” usichaze kanje lesi simo azobhekana naso uNjenje. Imbangi yakhe, uHunt, uvele walibeka ngembaba elokuthi akakwazi okufanele akwenze ukuze aqinisekise imiphumela emihle ngale midlalo. “Sengike ngaba sesimeni ezinzima kabi ebholeni kodwa ukudlala kathathu ngesonto elilodwa ubhekene neqembu eseliziqoqe zonke izindebe eminyakeni emibili edlule, nakanjani kuzokuba nomthelela ekutheni sizokwenzenjani kule sizini. “Uma senza kahle sizokuba nokuzethemba kanti uma singenzi kahle lokho kuzoba nomthelela ongemuhle kubadlali. Angazi kufanele ngenzeni. Ngizobona ngosuku lo mdlalo wokuqala. “Sizoyithatha ngokuhlukana le midlalo. Okungijabulisayo ngibona ukuzethemba nokuyihalela le midlalo kubadlali bami,” kusho uHunt osanda kuqinisa isikwati sakhe ngoMor Diouf obekuMaritzburg United. I-Bucs izobhekana neLamontville Golden Arrows kowePremiership e-Orlando Stadium ngoLwesihlanu ngo-8 ebusuku kanti iSuperSport izobhekana ne-Ajax Cape Town eCape Town Stadium, eKapa, ngalo uLwesihlanu ngo-8 ebusuku. Imidlalo yePremiership: NgoLwesihlanu: Ajax Cape Town v SuperSport United (Cape Town Stadium, 8pm), Orlando Pirates v Golden Arrows (Orlando Stadium, 8pm) NgoMgqibelo: Black Leopards v Bloem Celtic (Peter Mokaba Stadium, 3pm), Free State Stars v Bidvest Wits (Goble Park, 3pm), AmaZulu v Kaizer Chiefs (Moses Mabhida Stadium, 6pm), Mamelodi Sundowns v Chippa United (Lucas Moripe, 8.15pm) NgeSonto: University of Pretoria v Maritzburg United (Tuks Stadium, 3pm), Platinum Stars v Moroka Swallows (Royal Bafokeng Sports, 3pm). Imidlalo yeMTN 8: Agasti 18 - Mamelodi Sundowns v Moroka Swallows (Lucas Moripe, 8.15pm) Agasti 19 - SuperSport Uniyed v Orlando Pirates (Peter Mokaba Stadium, 3pm) Agasti 25 - Orlando Pirates v SuperSport United (Orlando Stadium, 8.15pm) Agasti 26 - Moroka Swallows v Mamelodi Sundowns (Dobsonville Stadium, 3pm) Comment Guidelines
IOL / Isolezwe / I-Bucs neSuperSport emidlalweni emithathu We like to make your life easier